Garsoorka Masar oo kala diray golayaasha deegaanka – SBC
Garsoorka Masar oo kala diray golayaasha deegaanka
Cairo:- Maxakamadda garsoorka maamulka golaha dowladda masar ayaa soo saartay xukun lagu kala dirayo dhammaan golayaasha deegaanka ee la soo doortay xilligii madaxweynihii hore ee dalkaas maxed Xusni Mubaarak, kuwaasi oo badankood ka tirsanaa xisbigii wadaniga dimuqaraadiga ee la kala diray.
Qaraarkan ayaa imanaya si loo ajiibo rabitaanka kacaanka shacabka ee xilka looga tuuray Xusni Mubaarak11 febarayo , islamarkaana codsaday in la kala furfuro dhamaan wixii ka haray nidaamkii hore.
Maxkamadda oo uu madax ka yahay Kamaal Al-lamci kuxigeenka madaxa golaha dowladda ayaa xukuntay in uu kala diro dhamaan golaha shacabka maxaliga heer qaran iyo in golaha sare ee ciidanka qalabka sida iyo golaha wasiiradda ay ilaaliyaan soo bixitaanka qaraarka lagu kala dirayo golahaas.
Ilo wareedyo ku dhow dhow garsoorka ayaa sheegaya in golaha dowladda ay soo gaareen ashtakooyin lagu dalbanayo in la kala diro golayaasha deegaanka,
Mukhtaar Haanii oo ah qareen ayaa sheegay in golayaasha deegaanka heer qaran ay tiradooda gaarayso 1750 gole, kuwaasi oo 98% ay gacanta ku hayaan firxadkii xisbigii wadaniga ee lakala diray.
Sidoo kale golayaashan ayaa kuwo musuqmaasuq oo la dagay, kuwaasi oo aan ka tarjumi jirin rabitaanka muwaadinka balse matalaya oo keliya aragtida xisbigii lakala diray isalamarkaana u janjeera rabitaanka xisbigaas.
Maxakmadda maamulka sare Masar ayaa qaadatay bishii April ee la soo dhaafay qaraar ay ku kula dirayso xisbul Wadani Al-dimuqaraadi islamarkaana waxa ay la wareegtay hantidii uu lahaa iyadoo sidoo kalana xaumihiisa lagu daray hantida dowladda.